Beddelaan, soo dejiso oo wax ka beddel fiidiyowyada VideoProc | Wararka IPhone
Ku Beddel, Soo Degso oo ku Beddel Fiidiyeyaasha VideoProc [Waqtiga Xaddidan ee Gaarka ah]
Iyadoo aan loo eegin shabakadda bulshada ee aad isticmaasho, waxaad arki doontaa sida labada Facebook iyo Twitter ay uga buuxsan yihiin fiidiyoow. TickTock sidoo kale wuxuu noqday mid si weyn loo garaaco, gaar ahaan wadamada sida Hindiya oo kale. Hadaad jeceshahay la shaqeynta fiidiyowyada Ama aad rabto inaad sameyso laakiin ma aadan helin arjiga ku habboon maanta waxaan ka hadlaynaa VideoProc.
VideoProc waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan in aan hadda ka heli karno suuqa, codsi noo oggolaanaya inaan ku qabanno ficil kasta oo maskaxda ku haya qaabkan. Laga soo bilaabo tafatirka iyo ku darida miirayaasha si aad uga soo dejiso fiidiyowyada barnaamij kasta, u beddelashada qaab kasta ama xitaa duubista shaashadda qalabkeenna.
Sida aad ku arki karto fiidiyaha bandhigga VideoProc, codsigan wuxuu na siinayaa kala duwanaansho aanan ku heli doonin codsi kale. Hadaan rabno isku koob dhamaan howlaha hal codsi (marwalba waa ikhtiyaarka ugu fiican) VideoProc waa dalabka aan raadineyno. Hoos waxaan ku tuseynaa dhamaan howlaha barnaamijkaan cajiibka ah uu noo ogolaado inaan sameyno.
1 Tafatirka iyo badalida fiidiyowga iyo muusikada qaabab badan
1.1 Fiidiyowyada Gooya
1.2 Kudar miirayaasha
1.3 Fiidiyowyo Cinwaan ah
1.4 Wareeji Fiidiyowyada
2 Ku dheji DVD-yada
3 Soo Degso Fiidiyowyada YouTube
4 Qor shaashadda qalabkayaga
5 Isku day VideoProc
Tafatirka iyo badalida fiidiyowga iyo muusikada qaabab badan
VideoProc waa wax cajiib ah dalabka loogu talagalay tafatir oo beddelo fiidiyowyada nooc kasta oo kale. Haddii aqoonteennu aysan aad uga sarreeynin barnaamijka laftiisa, waxaan dooran karnaa aaladda aan dooneyno inaan ku ciyaarno fiidiyowga si codsigu si otomaatig ah xulo qaabka ugu habboon. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale la shaqeyn karnaa feylasha maqalka, sidaas darteed waxaan ku abuuri karnaa codadkeenna dhawaaqa qaab aad u fudud.
Haddii aan rabno inaan wax ka bedelno fiidiyowyada, codsigan wuxuu noo oggolaanayaa inaan:
Haddii aan dooneyno inaan sii wadno ama wadaagno qayb ka mid ah fiidiyowga, waxaan ku sameyn karnaa si dhakhso leh oo fudud iyadoo la adeegsanayo dalabka hawsha dalagga. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa goo qaybo ka mid ah fiidiyowga (sida haddii aan codsaneyno faafreeb) qayb ka mid ah fiidiyaha. Codsiga ayaa daryeeli doona ku soo biirida qaybaha fiidiyowga la jaray.
Shaandhooyinka si loo habeeyo natiijada ayaa sidoo kale laga heli karaa barnaamijka VideoProc. VideoProc waxay ka dhigeysaa miirayaasha inaan helnos: grayscale, negative, buuq, milicsiga, afar-midab, saxida muraayadaha, vignette, heerarka RGB, xadka, mosaic, emboss, sepia, rinjiga saliida, afeef, faafid, iyo farsamo yaqaan.
Fiidiyowyo Cinwaan ah
Waxay kaloo noo ogolaataa kudar subtitles fiidyowyada. Thanks to shaqadan, waxaan ku dari karnaa subtitles filimyada aan aad ujeclaano ama aan ku heli karin luuqadeena laakiin aan marwalba rabnay inaan helno fursad aan ku aragno.
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad waxaad nasiib daro kuheshay inaad dhaqaajiso moobilkaaga daqiiqad kadib markaad bilowdo duubista si aad uqeebiso muuqaalka duubista, laakiin aaladda ayaan wax ka badalin oo fiidiyowga waxaa loo toogtay si qumman. Qalabka 'VideoProc' waxaan si fudud ugu beddeli karnaa jahaynta fiidiyowyada si aynaan ugu jeedin madaxeenna si aan ugu raaxaysanno.
Haddii mar uun aan galno adduunka abuurista waxyaabaha leh VideoProc, waana rabnaa ilaali shaqadeena, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno waa inaan kudarno astaamo-biyood. Codsigan ayaa noo oggolaanaya inaan ku darno illaa saddex sadar oo qoraal ah, dejinno cabbirka iyo font, iyo sidoo kale inuu na siinayo suurtagalnimada inaan sawir ku darno. Xaaladdan oo kale, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah in loo isticmaalo sawir qaab PNG ah halka asalka u yahay hufan.
Ku dheji DVD-yada
Xaqiiqdii guriga waxaad ku haysataa DVD arooska waalidkaa, kaaga, wiilka adeerka u ah ... ama filim duug ah oo aadan ka heli karin wax adeegsi fiidiyoow ah oo socda. Thanks to VideoProc waxaan ku jeexjeexi karnaa DVD kasta feylasha fiidiyowga. VideoProc ayaa adeegsada dardargelinta qalabka markaa maahan oo kaliya processor-ka shaqeynaya, laakiin sidoo kale sawirada ay kooxdeena heysato, sidaa darteed waqtiga beddelka si aad ah ayaa loo yareeyay.
Soo Degso Fiidiyowyada YouTube
Soo degsashada fiidiyowyada YouTube waa mid ka mid ah baaritaannada sida hubaal ah aad ugu sameysay ama aad ugu sameysay si joogto ah Google. In kasta oo ay run tahay in internetka aan ku hayno codsiyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan qabanno shaqadan, midda ay VideProc na siiso waa mid dhammaystiran oo dhammaystiran, maahan oo keliya inay na siiso a tiro badan oo qaabab video ah laakiin sidoo kale sababtoo ah waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan soo dejino kaliya codka fiidiyowyada, ku habboon inaan kala soo baxno muusikada aan jecel nahay iyada oo aan loo baahnayn inaan soo dejino bogagga.
Faa'iidada kale ee ay na siiso ayaa ah inaan awoodno ku dar tiro badan oo xiriiriyeyaal ah si aad uga tagto soo degsashada inta aan isticmaalno codsiyada kale, waxaan u baxnaa inaan kafeyno, waxaan daawaneynaa taxanaha aan ugu jecelnahay… VideoProc wuxuu noo ogolaanayaa ma ahan oo kaliya inaan ka soo dejino fiidiyowyada YouTube, laakiin sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo dejino fiidiyowyada Facebook, Vimeo iyo in ka badan 1.000 degel.
Qor shaashadda qalabkayaga
Haddii aan dooneyno inaan duubno shaashadda kombuyuutarkeena inta aan ku raaxeysaneyno ciyaarta aan ugu jecel nahay, markaan qoyskeenna kula hadlayno Skype, ama haddii aan rabno inaan sameyno casharro aan ugu sharraxno waalidkeen sida wax loo sameeyo ama loo sharraxo sida dalabku u shaqeeyo, oo leh VideoProc sidoo kale waxaan leenahay ikhtiyaarka ah shaashadda diiwaanka.
VideoProc wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhisno marka lagu daro xalinta shaashadda aan dooneyno inaan duubeyno, sheeg aag cayiman halka aan rabno inaan udhigno duubista, xaqiijinno in codka ciyaarta ama arjiga la duubay ama isticmaalno makarafoonka qalabkeena si aan ugu sharaxno talaabooyinka la raacayo.
Isku day VideoProc
Dhowr maalmood, waan ka faa'iideysan karnaa dalabka ay ragga VideProc na siinayaan oo aan helno Shatiga nolosha oo keliya 30,95 euro. Ruqsadani waxay noo ogolaaneysaa inaan u adeegsano arjiga iyadoon xaddidneyn oo laxiriira tafatirka fiidiyowga marka lagu daro baabi'inta calaamadaha biyaha ee ay kujiraan dhamaan duubitaanada ama daabacadaha aan ku sameynayno arjiga.
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad la shaqeyso fiidiyow laakiin aadan waligaa helin codsi kuu oggolaanaya inaad qabato dhammaan shaqooyinkan, waa inaadan ka maqnaan dalabkan cajiibka ah. dalab la heli karo 7da maalmood ee soo socda oo aad awoodi karto ka hel khadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Ku Beddel, Soo Degso oo ku Beddel Fiidiyeyaasha VideoProc [Waqtiga Xaddidan ee Gaarka ah]
Hadda waxaad ku rakibi kartaa Apple TV + Amazon Fire Fire Stick
UAG Monarch, quruxda iyo bahalka kiisaska loogu talagalay iPhone-kaaga